Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेरहद खारेज – Emountain TV
नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेरहद खारेज
काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गत महाधिवेशनबाट पारित गरेको ३२ वर्ष उमेर हद नयाँ अधिवेशन आउनै लाग्दा खारेज गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा उमेर हदका विषयमा छलफल मात्र गरेर तीन महामन्त्री र अध्यक्षले गरेको खारेजी पार्टी नेतृत्वले अनुमोदन गरेमा लागु हुने छ ।
विद्यार्थी राजनीति गर्न कम्तिमा पनि विद्यार्थी हुनुपर्छ र विद्यार्थी हुन बढिमा ३२ वर्षसम्मको उमेर मान्य हुने बहसपछि गत ११ औं महाधिवेशनबाट नेविसंघले ३२ वर्षे उमेरहद लागु गरेको थियो ।
त्यसवेला पनि एकपटकका लागि भन्दै ४० कटेकाहरुले नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकोमा यो नीति अर्को अधिवेशन देखि लागु हुने भन्दै थाति राखिएको थियो । तर, नेतृत्वमा देखिएको जाम र पार्टी नेताको आफू निकटकालाई च्याप्ने प्रवृतिका कारण पुन नेविसंघ पुराना नेताहरुकै नेतृत्वमा जाने संकेत देखिएको हो ।
नेविसंघका आगामी महाधिवेशनबाट आकांक्षिहरु भने ३२ वर्षे उमेर हद लागू गरे आगामी कात्तिकका लागि आह्वान गरिएको महाधिवेन नैं नहुनसक्ने दावी गर्छन् । १२ औं महाधिवेशनमा समेत दवावकै कारण उमेर हद राखेको भन्दै अहिले पनि दवावकै कारण यो व्यवस्था हटाएको उनीहरुको भनाई छ ।
महामन्त्री सरोजकुमार थापा त उमेर भन्दा महत्वपूर्ण महाधिवेशन भएको भन्दै महाधिवेन सुनिश्चित गर्नकै लागि उमेरहद हटाएको दावी गर्छन् । नेविसंघले आगामी कार्तिक १६ देखि १८ सम्म १२ औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ।
नेविसंघको संशोधित विधानमा अब केन्द्रीय कार्यसमिति सानो आकारको हुने र अनुमोदनका लागि पार्टीसमक्ष पेश गरिएको संशोधित विधानमा केन्द्रीय समितिको आकार एकसय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई घटाएर एक सय पाँचमा सिमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसमा ८५ जना निर्वाचित र २० जना मनोनित हुने व्यवस्स्था गरेको छ । नेविसंघले बुझाएको प्रस्तावित विधानको मस्यौदा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि लागु हुनेछ ।
कांग्रेसले पार्र्टी विधान अनुसार पार्टीका विभाग र समिति बनाउन नसकेर महाधिवेशनको अढाइ वर्ष एत्तिकै गुजारेको छ । आफै अव्यवस्थित भएको कांग्रेसका भातृ संगठनमा पनि उही रोग देखिएको छ ।